Duufaan qallalan: waa maxay, sida ay u dhacdo iyo halista | Saadaasha Shabakadda
Weligaa ma maqashay fikradda ah duufaan qalalan. Waxay dhacdaa marka duufaan dhacdo oo soo saarta roob yar ama aan lahayn. Waxay u muuqan kartaa iska hor imaad marka la eego haysashada onkodka roob la'aan, inkasta oo ay marar badan dhacdo. Qeybo ka mid ah galbeedka Mareykanka, badanaa waxay ku dhacdaa soo noqnoqosho weyn, gaar ahaan xilliga gu'ga iyo horraanta bilaha xagaaga.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato duufaanta qalalan, astaamaheeda iyo halista.
1 Waa maxay duufaan qalalan
2 Sababaha ugu waaweyn
3 Awood duufaan qallalan
Waa maxay duufaan qalalan
Markii aan ka hadalno duufaan qalalan, waxaan tixraaceynaa nooc ka mid ah duufaanta korantada oo leh wax yar ama aan roob lahayn. Badanaa waxaa laga arkaa cirka oo leh hillaac iyo onkod soo noqnoqda laakiin taasi roob ma soo saarto. Qeybta galbeed ee Mareykanka waxay u egtahay inay si joogto ah uga dhacdo guga iyo bilaha xagaaga horraantiisa. Waxay ku taal aagaggan halka tilmaanta kuleylku noqon karo mid aad u sarreeya oo qoyaan yar. Waxaa loo yaqaanaa duufaan qalalan maxaa yeelay waxay dhacdaa marka heerkulka iyo kuleylka ay ku kulmaan ka hooseeya daboolka daruurta. Qeybtaan daruuraha waxaa loo yaqaanaa dahaadhka anteenada.
Waa in lagu xisaabtamo inay runti roob tahay laakiin marka la eego heerkulka, roobabku, ha ahaadaan roob ama kuwa kale, ma gaari karaan dhulka maaddaama ay uumi baxayaan maadaama ay ku soo dhowaanayaan dhulka. Waxaan horeyba ugu aragnay qormooyin kale in tan nooca roobka waxaa loo yaqaan magaca Virga. Sidaa darteed, runtii roob ma da'o laakiin lama qiimeeyo maadaama uu uumi baxayo ka hor inta uusan ku dhicin dhulka dushiisa.
Aan aragno waxa sababaha ugu waaweyn ee duufaanta qalalan. Sababta koowaad ee ka dhalatay asalka noocyada duufaantan ayaa ugu wacan dabka kaynta. Dabka kaymaha badani waxay dhaliyaan koror heerkulka iyo hoos u dhaca qoyaanka deegaanka. Markay danab ku dhacdo il shidaal qalalan oo dhulka yaal, dab ayaa dhacda. Raajooyinkani waxay u muuqdaan inay saameyn ku yeeshaan gaar ahaan bilaha xagaaga. In kasta oo aanu roob da’in ugu yaraan heerka dhulka, duufaannada waxay leeyihiin hillaac badan. Hillaaca ku dhaca xaaladaha oomanaha waxaa loo yaqaannaa danab qalalan. Sababtoo ah shucaacan qalalan awgood waxay garaaci karaan ilaha shidaalka si fududna u shidan kartaa dab.
Dhirta iyo dhirta ayaa badanaa qalalan xilligan oo kale oo si fudud ayaa loo guban karaa. Xitaa marka roobabku ay gaari karaan dhulka, qoyaanka ayaa aad u hooseeya oo aan saameyn ku yeelan karin dabka. Intaa waxaa sii dheer, duufaantan waxay soo saari kartaa dabaylo xoog leh. loo yaqaan 'Microbursts' oo saameyn ku yeelan kara dabka taasoo ka dhigaysa mid ay adag tahay in la bakhtiiyo.
Awood duufaan qallalan
Aynu aragno imminka waxa iman kara duufaanka qalalan. Microbursts-ka aan kor ku soo sheegnay waa astaamaha saadaasha hawada oo la xiriirta nuucaan oo kale. Marka roobku uumi baxo sida dhibcaha biyuhu ugu soo dhowaadaan heerka dhulka, dhulku xoogaa wuu qaboobaa. Mararka qaarkood carradu si xagjir ah ayey u qabowdaa waqti gaaban. Waxaan ognahay in hawo qabow ay ka culustahay oo ay u janjeerto inay dhaqso dhulka ugu dhacdo. Barakaca hawada ee heerka dhulka wuxuu abuuri karaa dabeylo xoog leh. Roob yar ama aan lahayn duufaanka qalalan ayaa dhaliya oo qoyaanka hooseeya ayaa ka dhigaya xaaladaha Microbursts kuwo fiican.
Dabaylaha ay soo saaraan xaaladahan deegaan waxay kor u qaadi karaan qadar badan oo boodh ah iyo qashin kale, gaar ahaan gobolada ugu oomanaha badan. Waxaas oo dhami waxay keeneen duufaan boodh weyn oo sababi karta dhibaatooyin yar. Duufaanadan waxaa loo yaqaan haboobs waxayna si joogta ah uga dhacaan gobolada galbeedka. Duufaanadan boodhka ah waxaa ka jira maamulo maamuleed badan. Waa in maskaxda lagu hayaa inay tahay duufaanadan boodhka ah ee aad la kulanto, waxaad u dhiman kartaa neef qabatin.
Waxa ugu caansan ayaa ah in noocyada duufaanadan horay loo sii saadaalin karo. Waana in xaaladaha tababarka ay yihiin kuwo iska cad. Waxaa jira meelo aad u nugul oo dadka deegaanka looga digi karo bilowga duufaan qalalan. Khubarada saadaasha hawada ee dhacdada waxaa loo yaqaan IMET waxaana loo tababaray inay baaraan shidaalka caawiya faafida dabka. Khubaradan saadaasha hawada ayaa loo tababaray saadaalinta cimilada yar-yar. Sidan oo kale, waxay yaqaanaan habdhaqanka howlaha dabka marka loo eego xaaladaha deegaanka ee hadda jira.
Waxay sidoo kale u dhaqmaan sidii wakiillo kuwaas oo gacan ka geysan kara isu-duwidda dhammaan dadaallada xakamaynta saadaasha hawada. Go'aanka ay gaareen khubaradan saadaasha hawada waxaa lagu xisaabtamayaa si loo hagaajiyo xakamaynta iyo xakamaynta dabka duurjoogta ah iyadoo lagu saleynayo saadaasha ay ka sameyn karaan xawaaraha dabaysha iyo jihada.
Tan ugu caansan ayaa ah in duufaanta caadiga ah ay la socdaan qubaysyo. Si kastaba ha noqotee, maaha wax aan caadi ahayn in laga helo noocan oo kale ah duufaannada qalalan ee waddankeenna. Waxaa badanaa la sameeyaa markii biyaha daruurtu kama badna inay soo saaraan qubaysyo heerkulku aad buu u sarreeyaa jawiguna waa qallalan yahay. Sidaas ayaa dhibcaha biyuhu uumi baxaan intaanay dhulka dushiisa gaadhin. Badanaa waa kuwo aad khatar u ah, maaddaama hillaaca ka soo dhaca duufaannada qalalan ay sababi karaan dabka kaynta markay gaadhaan xaabo duudduuban ama xoqitaan qalalan. Maadaama uusan roob da’in ama roob aad u yar, fursadaha dabka inuu faafo waa badan yihiin.
Sidaad aragtay, noocyada dabaylaha waxay u baahan yihiin saadaal ka yar ama ka yar si ay u awoodaan inay ka fogaadaan inta badan dabka kaynta ee ka dhaca meelaha ay xaaladahaani had iyo jeer ka dhacaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto waxa ay tahay duufaanta qalalan iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaan qalalan